Car Pillow Suppliers & Factory - China Car Ohiri Isi Manufacturers
Oghere nchekwa ụfụfụ ihe nchekwa: ihe dị n'ime ime bụ ihe eji eme ka ebe nchekwa ihe ọhụụ, nwere nnukwu njupụta na nwayọ nwayọ, dị mma, ume na nchekwa, akwa ume, ume ume na mmiri.
Okpukpo sayensi: Okike kwesiri ike, jigide eriri nke isi, olu na ubu, jupụta oghere ahụ, ma dabara adaba iji belata ike ọgwụgwụ.
Ezi oru-aka: agịga ewepụghị na eri, isi ikuku, otu agịga na otu eri, ọbụlagodi stit, ọmarịcha ọrụ.
Ohiri Isi Car 1643-2
Oghere nchekwa ụfụfụ ihe nchekwa: A na-eme ihe dị n'ime oghere nke oghere ụfụfụ oghere ọhụrụ, yana njupụta dị elu na nwayọ nwayọ, nkasi obi, ume na nchekwa, akwa ume, ume ume na mmiri.
Okpukpo sayensi: Okike kwesiri ike, jigide eriri nke isi, olu na ubu, jupụta oghere ndị ahụ, ma dabara adaba iji belata ike ọgwụgwụ.
Oghere ebe nchekwa ụfụfụ: ịghaghachi azụ na nchedo ala dị jụụ, na nso nsogbu nrụgide, nwee ntụsara ahụ, na-eji ebe nchekwa ụfụfụ oghere ọhụụ, nnukwu njupụta nwayọ nwayọ, na-ekpo ọkụ n'oge oyi ma dị jụụ n'oge ọkọchị.
Erkpụrụ ergonomic: na-akwado olu, na-agbakwunye n'úkwù, na-ebelata nrụgide dị arọ na ọkpụkpụ azụ, na-emekọ ihe n'úkwù mmadụ, ma na-ebelata mmebi nke spine nke ngwangwa ụgbọ ala na nkwụsị, karịsịa mmetụta.
Isi Ihi ụra Sra restra 1048
Isi oche ụmụaka: ihe nrịgo 180 dị nro, mgbe ị na-akwado ọrụ agba na cervical cervical. Mgbe ị na-ehi ụra ma zuru ike n'ime ụgbọ ala, isi nwere ike ịdabere n'akụkụ ya na ohiri isi na-ehi ụra dị mma maka ichebe olu.